Mabhatani, iyo fashoni / nezve fashoni social network | IPhone nhau
Mabhatani, iyo fashoni / nezve fashoni pasocial network
Nyika yemasocial network inotobatanidza zvese, isu takaona Pokémon chats, iyo yakasarudzika Facebook, asi nyika yemafashoni yaigona kunge isipo. 21 Mabhatani chishandiso chakabudirira icho chine chinangwa chekuita sesocial network uye dhizaini chikuva. Nekuda kwemifananidzo yatinowana, tinogona kukurudzirwa kutaridzika kutsva, kana kungotenga mbatya dzevanhu vatinotevera. Icho chinhu senge Instagram, asi nefashoni yakawanda uye mashoma mamodheru. Isu tichaenda kukuudza izvo 21 Mabhatani ari nezve uye kuti nei ichive kubudirira muApple App Store.
Iko kunyorera kunotibvumidza, kwete chete kutarisa kutaridzika kwevamwe kutora muenzaniso, asi zvakare isa edu edu maitiro uye sunga nguo. Idzi hembe dzakabatana dzinokwanisa kuburitsa mibairo nemari zvichibva pavanhu vakazvifarira uye vatenga nguo yacho nekutenda kumifananidzo yedu. Aya ndiwo marondedzero anoita kambani yekuvandudza.
Yekutanga online fashoni nekutenga pasocial network iyo inokutendera iwe kuti uwane mari nekugovana zvimiro zvako.
Tsvaga mafashoni anokukurudzira: Tevedzera shamwari dzako nevanokufurira, ramba uchiziva zviri kuitika mazuva ano uye tsvaga zvakapfeka nguva dzese.
Tenga, chengeta kana kuisanganisa! Hapasisina mibvunzo, ruzivo rwese nekungobaya! Tsvaga kuti mamwe maButton akapfekei uye utenge zvipfeko zvavo, uzvichengete mumawadhiropu ako kana kuzvisanganisa.
Govana zvimiro zvako: Gadzira zvinoenderana nekugovana zvipfeko zvako uye nekumaka nyore hembe dzaunopfeka.
Gadzira ako makabati: Kunyangwe husiku hweZhizha, Nhabvu kana Hupenyu hwezuva nezuva ... Gadzira makabati akawanda sezvaunoda (pachena kana zvakavanzika) kuchengeta nekuronga zvese zvaunoda uye zvinokurudzira.
Wana mubairo wemaitiro ako uye pesvedzero: Batsirwa uye uwane mari nekutenda kunoitwa kuburikidza nemifananidzo yako.
Unogona kuiburitsa kunyanya kushandisa kumifananidzo yakoFunga kuti iwe unogona kushandisa iwo iwo aunoshandisa semuenzaniso pa Instagram, nerubatsiro rwekuti iwe unogona kuwana mibairo nekuda kwevateveri vako uye zvipfeko zvako.
Iko kushandiswa kunoenderana nechero iOS chishandiso kutanga kubva kuIOS 8.0, ndiko kuti, zvachose pasi rose. Inorema chete 16,5 MB, zvinoita sekunge isu zvakanyanyisa. Yakaunganidza avhareji ye4,5 nyeredzi munhoroondo yayo paApp Store, saka hapana mubvunzo yakahwina nyasha dzevashandisi vayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mabhatani, iyo fashoni / nezve fashoni pasocial network
Apple inotanga kudzosera zvitupa zvinoshandiswa mujeri